Boriborintany faha-4 Fokontany roa nahazo tetikasam-pampandrosoana PSAE
Notanterahana omaly maraina ny fifanaovan-tsonia momba ny tetikasa PSAE ( Programme de Solidarité d’Andohatapenaka et ses Environnants)
izay iarahan’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra sy ny boriborintany fahefatra, ary ny CDA sy ny distrika. Fokontany miisa 10 no tafiditra ao anatin’ity tetikasa ity ho an’Antananarivo Renivohitra. Anisan’ireny ny fokontany Ivolaniray, Anosibe Andrefana II, Ampefiloha Ambodirano. Ho an’ny Boriborintany voalohany I indray dia voakasika ny fokontany Andohatapenaka I sy II, Ankasina ary ny kaominina Bemasoandro Itaosy. Tanjona amin’izany ny hanovana ny toe-tsain’ny mponina eny anivon’ny fokontany, ny fampandraisana anjara sy andraikitra azy ireo, mba hahafahan’ny andrimasom-paritra mandray andraikitra hampandrosoana ny faritra misy azy, indrindra hisian’ny tamberin’andraikitra sy fitondrana tsara tantana eo amin’ny mpitantana sy ireo tantanina.